आमाको स्वास्थयको ख्याल कसरी राख्नुहुदैछ ? अब यसरी राख्नुहोस् आमाको स्वास्थ्यको ख्याल - ज्ञानविज्ञान
आमाको स्वास्थयको ख्याल कसरी राख्नुहुदैछ ? अब यसरी राख्नुहोस् आमाको स्वास्थ्यको ख्याल
आज आमातीर्थ अाैंसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । आजको दिन सबै सन्तानले आफ्नो जन्म र कर्म दिने आमाको मुख हेरेर मिठो खाने कुरा र उपहार दिएर मनाउने गर्छन् । आमा नभएकाहरु आमातीर्थ कुण्डमा गएर यो दिन मनाउने गर्छन् ।
आमातीर्थ औसीं मनाइरहँदा आमाको स्वास्थ्यलाई तपाईंले कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने पनि आवश्यक हुन्छ । आमातीर्थका दिन आमालाई दिइने उपहार उनको जीवनभरि नै ख्याल गर्नु हो । आमाको स्वास्थ्यको ख्याल तपाईंले सँधैभरि गरिरहनुभयो भने आमालाई आजको दिन मात्रै ख्याल गर्नुपर्दैन ।
आमाको लामो आयू र स्वास्थ जीवन चाहनुहुन्छ भने उनको स्वास्थ्यको साथै उनको खुशि र उनलाई के मन पर्छ भन्ने कुराको पनि ध्यान राख्नुपर्छ ।
आमा जसले तपाईंलाई जन्म दिन्छन् उनको स्वास्थ्यको लागि तपाईं सँधै सचेत रहनुपर्छ । कुनैपनि समय उनले भनेको र उहाँले चाहेको कुराको विशेष ध्यान राख्ने हो भने उहाँ सँधै खुशि रहनु हुन्छ । त्यति मात्र नभई उनको खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जसले उनलाई कुनै रोगले आक्रमण नगरोस् ।
कुनैपनि व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई सँधै राम्रो बनाइराख्नु छ भने उनको खानपान र खुशिको नै विशेष ध्यान राख्नुपर्छ । आमातीर्थ औसींका दिन आमालाई कस्तो खाना र उपहार दिने ? जानौं प्रा.डा.दिनेश कुमार लम्सालको यो टिप्सः
सबैभन्दा पहिले आमाको स्वास्थ्यको बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ
खानाका परिकार बनाउँदा आमाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ
चिल्लो, मसालेदार, अत्यधिक गुलियो, रातो मासु, ग्यास्ट्रिक गराउने र रोग बल्झाउने खालको खानेकुरा दिनुहुँदैन
फलफूल, हरियो साग, तरकारी, दूध, ताजा फलको जूश जस्ता सन्तुलित आहार दिनुपर्छ
खाना बनाउँदा खाना अपच हुने खालको खाना पनि बनाउनु हुँदैन
उपहार दिँदा महँगा खालका भन्दा पनि उनलाई कतै घुम्न जान मन छ वा के कुराले उनलाई खुशि भेट्छ त्यस्ता कुरामा ध्यान राखेर उपहार दिनुपर्छ
शुरु भयो गर्मी, यसरी गर्नुस् स्वास्थ्यको ख्याल
आजबाट चैत महिना शुरु भयो । नेपालमा विशेषगरी चैत–वैशाखको गर्मी भन्ने गरिन्छ । चैतदेखि जेठसम्म सूर्यबाट आउने तातो किरणले नै गर्मी बनाउँछ ।
यो समय सुख्खा हुने तथा हावाहरी पनि चल्ने समय हो । गर्मीको समयमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरु बढि देखिन्छन् । जाडोमा प्रायः चिसोका कारण रुघाखोकी जस्ता समस्या देखिने भएपनि गर्मीको समयमा धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या आउँछन् ।
हामीले अनुभव गरेकै छौं, गर्मी बढेसँगै पखला लाग्छ, खानेकुरा पच्दैन, फूड प्वोइजन हुन्छ । यहिबेला हो, छालाको संक्रमणदेखि टाउको दुख्नेसम्मको समस्या हुने । गर्मीमा शरीर आलस्य हुन्छ । थकाई लाग्छ ।
यस्तै झिँगाबाट फैलने रोगहरु लाग्ने, लामखुट्टेले टोक्ने, साङ्लाले दुःख दिने समय पनि गर्मीमै बढि हुन्छ ।
गर्मीयामको सबै नकारात्मक कुराहरु मात्र छैनन् । गर्मी समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
निरन्तर चलिरहने प्राकृतिक मौसमअनुसार आफूलाई पनि अलर्ट राख्नुपर्छ । जस्तै खानेकुरा, सरसफाईं लगायत दैनिकीसम्मका क्रियाकलापहरुमा मौसम वा समयअनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।
गर्मी याममा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छः
१. गर्मीमा बढी पसिना आउने भएकाले शरीरमा पानीको कमी हुनसक्छ । त्यसैले, पर्याप्त मात्रामा पानी वा झोलयुक्त पदार्थ पिउने ।
२. आँखाको सुरक्षाको लागि सनग्लास प्रयोग गर्ने, आँखालाई धुलो, धुवाँ आदिबाट बचाउने ।
३. मौसम अनुसारको सागपात, फलफूलको सेवन गर्ने । सडेगलेको, बासी, जथाभावी राखिएको खानेकुरा नखाने ।
४. सकेसम्म घर बाहिरको खानेकुरा सेवन नगर्ने । फूटपाथको खानेकुरा, जस्तै चटपटे, पानीपुरी, मम, चाउमिन जस्ता खानेकुराले पाचन प्रणालीलाई खराब गर्न सक्ने भएकाले यस्ता खानेकुरा सकेसम्म नखाने ।
५. सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने । पसिना बग्ने, धुलो–धूँवा शरीरमा टाँसिने भएकाले नियमित नुहाउने ।
६. घरबाहिर निस्कँदा पुरै शरीर ढाक्ने पहिरन लगाउने । धुलो, धूँवा तथा घामको सोझो किरणबाट छालालाई जोगाउने ।
७. आफ्नो घर, आँगन वा आफू बसोबास गर्ने आसपासको क्षेत्र सफा, सुग्घर राख्ने ।
८. पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी, फोहोरको थुप्रो, कुहिएका बस्तुहरु हटाउने ।
९. रातमा सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने । लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्न धूपलगायतका हानिकारक चिजहरुकाले प्रयोग नगर्ने ।
१०. बालबालिका, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा रोगीहरुको विशेष ख्याल गर्ने, उनीहरुको खानपान तथा नियमित सरसफाईंमा ध्यान दिने ।
किन बढ्दैछ छालाको समस्या ?
चिटिक्क र राम्रो देखिन जो कोहीलाई मन लाग्नु स्वाभाविकै हो । सुन्दर र आकर्षक व्यक्तित्व भएको मानिसमा सबैको ध्यान जान्छ । सौन्दर्यका पारखीहरु खासगरी त्वचा अर्थात छालाको हेरचाहमा बढी सजग देखिन्छन् र यसले व्यक्तिको आकर्षक छविलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ ।
छालाको रङ कस्तो छ भन्नेमा भन्दा पनि कसरी उसले आफ्नो छालाको हेरचाह गरेको छ भन्ने कुराले अधिक अर्थ राख्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
नेपालमा बढी देखिने पाँच रोगमध्ये एक छालासम्बन्धी भएको छालारोग विशेषज्ञ डा. रविन्द्र बास्कोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्,“नेपालमा छाला रोगको समस्या धेरै छ । कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै र पाँच प्रतिशतलाई कडा खालको रोग छ जसको तत्काल उपचार जरुरी छ ।”
यो रोग मौसम अनुसार पनि मानिसमा देखिन सक्छ । हिमाल, पहाड र तराईको फरक फरक भौगोलिक अवस्थामा बसोबास गर्नेहरुलाई हुने छालाको समस्या पनि फरक फरक हुन्छ । जाडो र गर्मी मौसममा छालाका फरक फरक समस्या देखापर्छन् ।
आफ्नो छालाको ख्याल राख्नु सुन्दरतासँग मात्र नभएर उसको स्वास्थ्यसँग पनि उत्तिकै जोडिएको विषय हो भन्छन् छालारोग विशेषज्ञ प्राडा सविना भट्टराई ।
“बजारमा पाइने महँगा क्रिम लगाएर मात्र राम्रो भइँदैन, त्यसका लागि सन्तुलित खाना, पर्याप्त पानी सेवन तथा निद्रा र नियमित व्यायाम सबै आवश्यक हुन्छ,” उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समय शहरीकरणले उब्जाएको फोहर, धुलो, धुवाँ र प्रदूषणले छालालाई गम्भीर असर पारिरहेको छ । यसले अनेकथरि चर्मरोग बढाउने गरेको चिकित्सकको अनुभव छ । चिकित्सकहरु छालामा साधारण समस्या देखिएपनि विशेषज्ञलाई जँचाएर उचित र नियमित उपचार विधि अपनाउन सुझाव दिन्छन् ।
सन्तुलित र सही तरीकाले छालालाई स्याहार्न जानियो भने स्वस्थ र सुन्दर रहन सकिने डा भट्टराई बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाका बहिरङ्ग सेवामा उपचारार्थ आउनेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत छालाका समस्याबाट पीडित हुन्छन् ।
डा बास्तोला भन्छन्, “हामीले छालाका समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिने गरेकाले छालामा विभिन्न एलर्जी हुने, दागधब्बा आउने, उमेरभन्दा अगावै बूढो देखिने, चाउरी पर्ने, अनुहार तथा कपाल सुक्खा हुने र छालाको सौन्र्दयपन हराएर जानेजस्ता समस्या बढ्दै गएको छ ।’’
छालाका समस्यालाई सामान्य ठानियो र समयमै सही उपचार गरिएन भने त्यसले पछि क्यान्सरको रुप लिन सक्ने खतरा पनि रहन्छ ।
“छालाको समस्या बढ्दै गएमा वा धेरै घाममा काम गर्ने व्यक्तिमा छालाको क्यान्सर देखिन पनि सक्छ,” डा भट्टराई भन्छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चर्म तथा यौन रोग विभागका पूर्व प्रमुख प्राडा दिनेशविनोद पोखरेलका अनुसार वातावरणीय प्रदूषण, अस्वस्थकर खानपान र जथाभावी औषधिको प्रयोगलगायतका कारण छालाका समस्या बढेर गएको छ । उनका अनुसार दाद, संक्रमण, डण्डीफोर, चायाँपोतो, कत्ले रोग र दुबी बढी देखिने समस्या हुन् ।
छालाका पाँच मुख्य समस्या
गोलो घेरामा देखिने चिलाउने सरुवा रोग हो दाद । रोगीको कपडा प्रयोग गर्दा, सँगै सुत्दा यो रोग सर्न सक्छ । लामो समयसम्म उपचार गर्दा पनि यो रोग निको भएन भन्ने गुनासो बढी सुनिन्छ । तर राम्ररी उपचार गर्ने हो भने दाद निको हुन्छ ।
एग्जीमा पनि भनिने छालाको अर्को बढी देखिने समस्या एलर्जी हो । यो दाद जस्तो अरुलाई सर्दैन । निकै चिलाउँछ तर उपचार गरेमा निको हुन्छ । लुतो निकै चिलाउने छालाको अर्को रोग हो । यसले गर्दा मानिसलाई अरुका अगाडि बस्न समेत अप्ठयारो पार्छ । एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने यो रोगले व्यक्तित्वलाई नै खराब बनाइदिन्छ । यो एक प्रकारको किटाणुबाट हुन्छ ।
किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दा शारीरिक परिर्वतन भई डण्डीफोर आउन सक्छ । यो अनुहार र शरीरमा पनि आउँछ र उपचार गर्दा निको हुन्छ । कसैकसैको हर्मोनमा खरावी भएर पनि यो रोग हुनसक्छ भने औषधिको असर र राम्रो हुने रहरले बजारबाट जथाभावी क्रिम किनेर लगाउने गर्नाले पनि मुखमा डण्डीफोर आउँछ । यसलाई निर्चोनु हुँदैन । यसो गर्दा अनुहारमा दाग बस्न सक्छ ।
बाँकी समस्या किटाणु वा ब्याक्टेरियाको संक्रमणका कारण उत्पन्न हुन्छ । घाउ पाक्ने, सुन्निने, दुख्ने र चिलाउने जस्ता कारण छालामा संक्रमण देखिन सक्छ ।
त्यसबाहेक शरीरभित्रैबाटै हुने समस्याले पनि जनै खटिरा, छालाका एलर्जी जस्ता छालाका समस्या निम्ताउँछ । मासुको सेवन, धुलो, अत्तर, अण्डा र गन्धको एलर्जीले छालामा समस्या हुन्छ । कसैलाई क्रिमकै एलर्जी हुनसक्छ । कसैलाई घाम र जाडोको एलर्जी हुन्छ । यी समस्याको बेवास्ता गरियो भने त्यसले पछि ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।
नेपालमा छालाको क्यान्सरका बिरामी कम देखिएपनि यो बढ्दो क्रममा छ । देशमा कति मानिसलाई छालाको समस्या छ भन्ने यकिन तथ्याँक उपलब्ध छैन ।
छालाको क्यान्सर धेरै कारणले हुनसक्छ । एउटा कारण भने घामबाट जलेर पनि हुन्छ । लामो समयसम्म सिधा घामको सम्र्पकमा रही काम गर्ने व्यक्तिलाई यस्तो समस्या हुन्छ ।
छाला स्याहार्ने विधि
सुन्दरता बढाउन र सामान्य ठानेर आफैँ औषधि किनेर खाने, बजारमा पाइने जुनसुकै क्रिम र लोसन प्रयोग गर्ने बानी नबसाल्ने सुझाव चिकित्सकहरु दिन्छन् ।
छालाको ख्याल गर्न अनुहारमा सुहाउँदो घामबाट बचाउने सन ब्लक, सनस्क्रिन क्रिमहरू लगाउने, प्रशस्त पानी पिउने र छालालाई चिल्लो (मोइस्चर) बनाएर राख्ने गर्नुपर्छ । सनस्क्रिनले कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ । हरेक तीन घण्टाको फरकमा अनुहारको छालाको प्रकृति हेरी विशेषज्ञको सल्लाहमा सनस्क्रिम लाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
जाडोमा सामान्यतया छाला सुख्खा हुन्छ । जसरी शरीरलाई पानी आवश्यक हुन्छ त्यसरी नै छालालाई सुख्खा हुनबाट जोगाउन मोइस्चर दल्नुपर्छ तर, चिकित्सकको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।
Don't Miss it के तपाई अफिस समयमा आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ताे काइदा
Up Next तपाईंको खाने तरिका कस्ताे छ ? यस्ता बानीले निम्त्याउँछ समस्या
डन्डिफोरका कारण जङफुड
डण्डिफोरबाट बिशेष गरी (१४–२१) वर्षसम्मका युवायुवती पीडित हुन्छन्। उनीहरूले गर्ने खानपान जस्तै, धेरै तेलजन्य पदार्थ, पिरोजन्य खाना, जंक खाना (चाउचाउ,…
कुन कुन उमेरका मानिसहरुको लागि कति निद्राको आवश्यक ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय निद्रा फाउण्डेशनले गरेको अनुसन्धानमा जनाइए अनुसार विभिन्न उमेरका मानिसहरुको निद्राको आवश्यकता पनि फरक हुने गर्छ। तपाईंले…
एकदिनमा स्वस्थ मानिसले कुन बेला, कसरी र कति पानी पिउनु पर्दछ ? अत्यन्तै महत्वपुर्ण जानकारी !
यस्ता छन्, ल्वाङ खानुको फाइदा
चिसो भगाउनः जाडोमा चिसो भगाउन पनि ल्वाङको प्रयोग गर्न सकिन्छ । नियमित ल्वाङको प्रयोगले चिसो मौसममा लाग्ने कतिपय भाइरल रोगबाट…
मुखै रसाउने पानीपुरी, कसरी बनाउने घरमै ?
धेरैलाई स्वादीलो पानीपुरी लाग्छ । पानीपुरी भनेपछि थप ब्याख्या गरिरहनु नपर्ला । नेपाली सडकमा खुब बेचिने खाद्य पदार्थ हो – पानीपुरी…
दम्पतीबीच खटपट भइरहन्छ भने यसो गरौं – साधारण कुराले पनि फरक पार्छ सम्बन्ध
पती-पत्नीबीच कहिले कही मनमुटाव हुन्छ । कति कुरामा विमति हुन्छ । भनाभन हुन्छ । झगडा हुन्छ । पारिवारिक जीवन चलाउने…
अब सुख्खा मौसममा हुने सुख्खा हावाका कारणले लाग्ने पिनास बाट कसरी बच्ने ?
पिनास नाकको भित्र दायाँबायाँ रहने खाली ठाउँमा अवरोधका कारण हुने रोग हो । साइनोसाइटिस भनेको टाउको र अनुहारका हाडहरुमा हुने…
नेपालमा विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालय खोल्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ।नेपालमा विश्वविद्यालय मात्र नौवटा छन् । प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालय तथा…
बढ्दाे जाडाेका कारण जोर्नीको दुखाईबाट पिडित हुनुहुन्छ ? अाउनुहाेस् यति कुरा जाने घरमै गर्न सकिन्छ उपचार
बढ्दाे जाडाेका कारण अहिले थुप्रै मानिसहरू जोर्नीको दुखाईबाट पिडित छन् । अझै विशेषगरि बुढापाका, गर्भवती, रोगी आदिलाई बढी दुख दिन्छ । जोर्नीको…